China Bandpass Mafirita, Optical Mafirita, Bandpass Optical Filter Mugadziri
Tsanangudzo:Bandpass Mafirita,Optical Mafirita,Bandpass Optical Sefa,Optical Bandpass Sefa,,
 HomeProductsOptical SefaBandpass Mafirita
Bandpass Mafirita (Total 26 Products)
Zvigadzirwa zve Bandpass Mafirita , isu tiri vashandi vanobva kuChina, Bandpass Mafirita , Optical Mafirita vatengesi / firisi , mabhizimisi ekugadzirwa kwezvakakura zve Bandpass Optical Sefa R & D nekugadzira, isu tine shanduro yakakwana yekutsvaga kutengesa uye kutsigirwa kwekambani. Tarisira mberi kubatana kwako!
Optical Girazi 850nm Bandpass Sefa
Iyo bandpass firita (BPF) chishandiso chinopfuura wavelength mukati meimwe renji uye chinoramba (chinodzivisa) wavelength kunze kweiyo renji. Kushanda: fluorescence analyzer, microplate kuverenga, tambo yeTV yekuvandudza michina, isina waya...
Iyo bandpass firita (BPF) chishandiso chinopfuura wavelength mukati meimwe renji uye chinoramba (chinodzivisa) wavelength kunze kweiyo renji Kushanda: fluorescence analyzer, microplate kuverenga, tambo yeTV yekuvandudza michina, isina waya...
Iyo bandpass firita chinhu cheanopindirana iyo inobvumira chaiyo wavelength yechiedza kuti ipfuure nepakati ichibvumira imwe wavelength kuratidza (kana kudzikisira). Zvinoenderana neyekushanda wavelength, inogona kuve yakakamurwa kuita: UV bandpass...
China Bandpass Mafirita Vatengi
Iyo bhendi-yekupfuura firita kana bandpass firita (BPF) chishandiso chinopfuura masaisai mukati meimwe renji uye chinoramba (chinodzivirira) mafambiro ari kunze kweiyo renji
Mafirita eBandpass anoshandiswa zvakanyanya mune zvisina waya ma transmitter uye anogamuchira. Basa hombe rerunhare rwakadai mukutepfenyura ndere kugadzirisa bandwidth yechiratidzo chinobuda kubhendi rakapihwa kufambisa. Izvi zvinodzivirira anotumira kubva mukukanganisa zvimwe zviteshi. Mune inogamuchira, iyo bandpass firita inobvumidza masaini mukati meakasarudzika maratidziro enzwi kuti anzwike kana kudomwa, nepo achidzivirira masaini pane asingadiwe mafiringi kuti asvike mukati. Zviratidzo pazviyero zviri kunze kwebhendi iro rinogashirwa rinogashira, rinogona kuzadza kana kukuvadza rinogamuchira. Pamusoro pezvo vanogona kugadzira zvisingadiwe zvigadzirwa zvekusanganisa zvinowira mubhendi uye zvinokanganisa necheni yekufarira. Wideband vanogamuchira vanonyanya kubatwa nekukanganisa kwakadai.  Sefa ye bandpass inogadzirisawo chiratidzo-kune-ruzha chiyero uye kunzwisisika kweanogamuchira.
Mune ese ari maviri anotumira uye anogamuchira mafomu, akanyatsogadzirwa-bhendi mafirita, iine yakakwana bandwidth yeiyo mode uye nekukurumidza kwekutaurirana kuri kushandiswa, kuwedzera huwandu hweanotumira masaini anogona kuve aripo muhurongwa, uku uchidzikisa kupindirana kana kukwikwidzana pakati pezviratidzo.
Kunze kwemagetsi uye kugadziriswa kwemasaini, mumwe muenzaniso wekushandiswa kwemabhendi-ekupasa mafirita mune yesainzi yemuchadenga. Zvakajairika kubhendi-kupasa firita yazvino meteorological dhata ine nguva yenguva, semuenzaniso, mazuva matatu kusvika gumi, zvekuti chete madutu anosara sekuchinja-chinja muminda yedata.
Bandpass Mafirita Optical Mafirita Bandpass Optical Sefa Optical Bandpass Sefa Dual Bandpass Mafirita